मित्रले सधैँ ललिपप दिन्थे, बाटोमा भेट्दा गाला मुसार्दै हिँड्थे । बच्चा अढाइ वर्षमा दौडिँदै थियो । उसका आफ्नै दु:ख थिए । पेशेवर बाबुआमा थिए । अरू त कुरा छाडौँ, ऊ घरमै जन्मन पनि पाएको थिएन । उसको पहिलो रुवाइ अस्पतालको त्रासद र कोलाहलयुक्त परिवेशमा भएको थियो ।
जतिसुकै सभ्य र आधुनिक ठानिए पनि बच्चाबच्ची आफ्नै घरमा जन्मन पाउनु र नपाउनुमा ठूलो अन्तर पर्छ रे ! उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार घरमा जन्मन पाउनुमा सुरक्षित हुन्छ रे ! तर प्रशव वेदनाका नारीहरूको घरमा कम्पनी स्वास्थ्यले कहाँ सेवा दिन सक्छ र ?
स्मरणीय के भने इतिहासमा सुँडेनीहरूले घरमै नि:शुल्क सेवा दिन्थे । तर आजकल हजारको ललिपप देखाइएको मात्रै होइन, आमाका कोखहरू कम्पनीले कमाउ–धन्दा बनाएका छन् । बच्चाबच्चीहरू जन्मनसमेत पाउँदैनन्, कुबाटोबाट निकालिन्छन् । यसरी निकालिन थालेपछि आमा र बच्चाबच्चीको मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्यको त कुरै छाडौँ, आमालाई दिनुपर्ने पौष्टिक तत्त्व, नियमित स्वास्थ्य सेवा र स्याहारसुसार पनि कमिसन खेलको कैदमा बन्धक बनेका छन् । समाजवादउन्मुख संविधानको कमाल कहाँ सजिलै बुझिन्छ र ?
पेशेवर हुनुका आफ्नै दु:ख छन् । सुख हुनु तर सन्तोष नहुनु यसको मुख्य लक्षण हो । यो असन्तोषको लहर परिवारमा कोरोनाजस्तै गरेर फैलिन्छ । कतै लक्षण देखाउँछ त कतै यो बिनालक्षण पार लाग्छ । कतै यो शारीरिक, मानसिक घातप्रतिघातमा परिणत हुन्छ ।
कोरोना पेशेवर हुँदा नारीहरूका दु:ख थपिएका छन् । घरका मूल्यहीन काम पनि सक अनि परका काम पनि तिम्रै थाप्लोमा । तर पुरुष करिब–करिब मस्तराम नै छन् । मलाई पनि डेढ वर्षको छोरोको ‘डे केयर’ को जिम्मा थाप्लोमा आइपुग्यो । प्राध्यापकीय स्वतन्त्रतालाई डे केयरका लागि भरपुर उपयोग गरियो ।
बच्चा बाबु कहिलेकाहीँ पेसा व्यवसायमा सँगै जान्थ्यो । करिब तीन वर्ष टेक्दै हुँदो हो– मित्रले मुख फोरिहाले, ‘पछिपछि लिएर हिँडेर मासिक ५/७ हजार जोगाउनु भएको छ है ।’
म बेलाबेला बच्चालाई घर ल्याउँथेँ । त्यसबखत उसले घरमा हजुरबुबा/हजुरआमासँग आत्मीयता साट्थ्यो । शिष्टाचार सिक्थ्यो । आफन्त, छरछिमेक, साथीभाइ चिन्थ्यो । धेरै बस्न पाउँदैनथ्यो । वर्षको दुई तीन पटक दु:खै गरेर घर आउँथ्यौँ, उसैका लागि ।
तीन वर्ष नपुग्दै सहरमा ऊ भन्दा साना केटाकेटीहरू मन्टेश्वरी जान थालिसकेका थिए । ऊ दिनभरि एक्लै खेल्थ्यो । धेरै शुभचिन्तकहरूले ऊ स्कुल नगएकामा चिन्ता जताउँथे । दबाब हामीमाथि त छँदै थियो । चुपचाप साथीहरूको सल्लाह सुन्नको विकल्प थिएन । चार पुग्दाको जेठका बेला घरमा ऊ र म मात्रै बस्यौँ । पछि म आफ्नो घरबाट फर्केपछि मामाघर बस्यो । दुई महिना बसेर साउनमा आमासँगै फर्कियो ।
बाउको जेठ र आमाको असारमा बिदा पर्नु पनि उसका लागि फाइदै थियो । घरमा उसले लिची, आँप, अनार खुब खायो । मावली जिजुहजुरबाको काँध चढेर लिची खान्थ्यो रे ! कहिलेकाहीँ बानरले खसालेको मेवा उही बारीमा बसेर खान्थ्यो रे ! केरा पनि खुब खाएछ ।
माइजूले घाँस काटेर फर्कंदा भान्जाका लागि ल्याइदिएको चिउरी पनि सर्लप्पै पारेछ । मानव मात्र होइन, पशु प्राणीलाई चिन्ने मौका पनि पाएछ ।
अब त साउनमा फर्केर एकाध घन्टा जाने बालशिक्षामा बस्न पनि उसलाई महाभारत हुन थाल्यो । दसैँपछिको प्रतिकूल परिस्थितिमा ऊ मावली र घर ओहोरदोहोर गरिरहेको छ । दुवैतिर उसले सिक्ने कुरा भनेका परम्परागत नै छन् । कृषि प्रणालीमा आधारित छन् । घाँस र मलसँग खेल्ने, पानी र माटो खेल्ने, कुटो र कोदालोसँग उसको नाता कसिएको छ । बाख्रा, भैँसी उसका लागि प्रिय छन् ।
पाँच वर्षको उमेरमा किताबी शिक्षाका केही कुरा पनि सिकेकाले उसका लागि एक कक्षा सीधै पढ्ने अवसर आउँछजस्तो छ ।
दिनमा कुनै बेला उसले पढ्छु भन्दै आफ्ना किताब समात्छ । सायद पढाइप्रति अन्तरआत्माबाटै रुचि पो जागेको छ कि ? त्यसो हो भने सहरतिरका दीक्षान्तले हावा खान बेर छैन । मित्रले भनेजस्तै पाँच/सात हजार मात्रै होइन, अरू पनि आर्जन भएको छ कि ?
कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै कोरोनाका कारण आम अभिभावकले यसपालि मैलेजस्तै आफ्ना सन्तानका लागि समय दिन पाएका छन् । त्यति मात्र होइन, गाउँ फर्किएका बाबुआमाले कृषि–कर्म गर्न पाएका छन् भने बालबालिकाले परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति सिक्न पाएका छन् । प्रकृति र वनवातावरणलाई नजिकबाट बुझ्न पाएका छन् । कोरा शिक्षा र कम्पनी शिक्षाको गति रोकिएको छ । अनलाइनवाला शिक्षाका लागि हतार गर्नुपर्ने केही छैन । पाँच वर्षमुनिका बच्चाबच्चीलाई यो ठूलो अवसरका रूपमा आएको छ ।
उनीहरूलाई यो परम्परा, शिष्टाचार, संस्कृति सिक्ने, प्रकृति विचरण गर्ने, नाता सम्बन्ध सिक्ने अवसर हो । तर अभिभावक परिक्षित बन्न सक्छन्/सक्दैनन्, त्यो थाहा पाउन केही वर्ष लाग्ला । त्यसो त आफूहरू मोबाइलबाट कति मुक्त हुन्छन्, त्यसले बालबालिकाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
अभिभावले बालबालिकालाई पढ् पढ्को रटान लगाएर मात्रै हुने छैन । आफूहरू मोबाइलमा भुल्छन् कि अन्य कुरामा, त्यसले धेरै चाँजोपाँजो निर्धारण गर्नेछ ।
यो वर्षको शिक्षाको जिम्मा अभिभावकको हातमा छ । अभिभावक आफ्ना पनि लालाबालाकै साथमा छन् । सायद बालबालिकाको अन्तरकुन्तरमा आफ्ना अभिभावकहरूको परीक्षा चलिरहेका होलान् ? नातिले बाउलाई हजुरबालाई फाल्दा डोकोचाहिँ नफाल्नू भनेको कथा बालबालिकाले यसपालि सुन्न पाएका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा घरमा कोही कमाउन परदेश लाग्यो भने छोराछोरी पढाउने नाममा आमाबाउ सहरतिर बस्ने प्रचलन छ । यसले अरबमा कमाएको पैसा स्कुल कम्पनी र घरलाई बुझाउँदा ठीक्क हुन्छ । आफ्नो घरको सम्भावना समाप्त भएको छ ।
अर्को कुरा, गाउँ र सहरको पढाइमा रत्तिभर अन्तर छैन, बहानाबाजीबाहेक ।
सहरको बसाइ अत्यन्त कष्टकर छ । मोबाइल परिवारमा सबैका लागि सबथोक भएको छ । बालबालिकामा पर्ने असर विज्ञहरूको बौद्धिक विलासमा सीमित छ ।
अभिभावकलाई उनीहरूको कुराले छोएको छैन । छोरीछोरालाई स्कुलको जिम्मा लगाएर ढुक्क बन्ने अभिभावक बढेका छन् । कम्पनी स्कुलबाहेक सबै घाटामा छन् ।
तर कोरानापछि गाउँघर हराभरा छन् । मान्छेहरूको चहलपहल बढेको छ । छाडिएका, टाढिएका घरहरू लिपपोत भएका छन् । करेसाबारी खनीख्रोसी गरिएको छ । श्रमले पसिना खसेको छ । बालबालिकाले पनि खेल्ने प्रशस्त ठाउँ पाएका छन् । देखासिकी गर्ने काम पाएका छन् । किम्बु, ऐँसेलु, काफल, तिजु खान पाएका छन् । उनीहरूलाई पढाइको चिन्ता छैन । पढ्दा पो कहाँ रहरले पढ्न पाएका थिए र विचराहरूले ? अभिभावकको इज्जत र प्रतिष्ठा, कम्पनीका अनावश्यक किताबहरूको थुप्रो, बिजातीय भाषाको नत्थी, घर फर्कंदा कक्षाकार्यको भारीले जीवनै दिक्दार भएको थियो । सायद धेरै विद्यार्थी मनहरू यतिबेला कोरोनाको त्रास र मोबाइलको ह्याङबाट मुक्त भएर हावामा कावा खाँदै होलान् ।
फेरि प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए के यो वर्ष विद्यार्थीहरूलाई घरकै हावामा कावा खुवाउने त ? आज अभिभावकले किताब पनि त बोकेका छैनन् । तसर्थ घरमा पढाइ जटिल छ । अनलाइन कुराको विषय नै बन्न सक्दैन । परीक्षाको लागि अझ दुई महिना कुर्नु नै उचित छ । विकल्पको खोजी भने आवश्यक छ । गृहकार्य परीक्षाको मापदण्डको एउटा आधार हुन सक्छ । आखिर त्यो पनि मूल्यांकनै हो । चाहने हो भने यसपालि ‘पेपर पेन्सिल टेस्ट’ लाई फेर्ने अवसर छ । सबैतिर नहोला, धेरै ठाउँमा स्कुल प्रशासनले यो कार्य गर्न सक्छ ।
तत्कालका लागि स्कुल कम्पनीहरूले अभिभावकका लालाबाला भर्ना गर्न जुलुसै उठाउनु खासै आवश्यक छैन । आज मोबाइल फोन हरेकका हातहात छन् । तिनै मार्फत भर्ना गरौँ । सकिन्छ, किताब घरघर पुर्‍याऔँ । छोराछोरीको पढाइ जिम्मा अभिभावकलाई दिऊँ । संयोजन शिक्षकले गरौँ । दसैँसम्मलाई स्कुले ढोका बन्द गरेरै घरमा ढुक्क बसौँ !
लेखक धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस, बाग्लुङका उपप्राध्यापक हुन् ।